Dhageyso:Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo sheegay in la baarayo Gubashada Isbitaalada Madiina iyo Banaadir. – Gedo Times
Dhageyso:Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo sheegay in la baarayo Gubashada Isbitaalada Madiina iyo Banaadir.
21st March 2016 admin Wararka Maanta 5
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maanta Kormeer ku tagay Isbitaalada Madiina iyo Banaadir oo Xalay uu labaduba dab ka kacay ayaa sheegay in baaritaan lagu sameynayo waxa isku soo beegay Gubashadooda.
Guddoomiye Yuusuf ayaa sheegay in Shacabka Muqdisho ay is weydiinayaan waxa hal Habeyn isku soo beegay Gubashadooda Isbitaalada Madiina iyo Banaadir oo ah Labo Isbitaal oo Muhiim ah Shaqo weyna u haya Ummadda Soomaaliyeed .
Hadalka Guddoomiyaha ayaa imaanaya iyadoo Xalay uu Dab ka kacay Baqaar lagu Keydiyo Daawada oo uu leeyahaya Isbitaalka Banaadir iyo sidoo kale Qeybta Qaliinlka Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho,kuwaas oo sababay Khasaaro Hantiyadeed.
Halkaan Ka Dhageyso .
Abu Muscab “Todobaatan askari ayaanu ku dilnay Laanta-Buuro”.
Dhageyso: Xoghayihii Ururka Suxufuyiinta Qaran ee Nusoj oo Is Casilay+ Sawiro